Waxyaabaha - ZHONGHUI WAXGARADKA CAQLIGA (JINAN) CO GROUP CO., LTD
Macdanta ka kooban macdanta (shubista macdanta) waa nooc cusub oo ah walxo isku dhaf ah oo ay samaysay cusbi epoxy la beddelay iyo agabyo kale sida xidhmooyin, granite iyo walxo kale oo macdan ah oo isku jira, waxaana lagu xoojiyay xoojinta fiilooyinka iyo nanoparticles. Badeecadeeda waxaa badanaa loo yaqaan macdanta. shubid. Agabyada isku dhafan ee macdanta ahi waxay noqdeen beddel biraha dhaqameedka iyo dhagxaanta dabiiciga ah sababtuna waa nuugitaankooda shoog aad u fiican, saxnaanta cabbirka sare iyo hufnaanta qaabka, tabinta kuleylka oo hooseeya iyo nuugista qoyaanka, iska caabinta daxalka oo aad u fiican iyo guryaha ka-hortagga magnetka. Qalab ku habboon sariirta mashiinka saxda ah.
Waxaan qaadanay habka moodeelka dhexdhexaadka ah ee walxaha isku-darka ah ee cufnaanta sare leh, oo ku saleysan mabaadi'da injineernimada walxaha iyo xisaabinta wax-soo-saarka sare, waxaan aasaasnay ​​xiriirka ka dhexeeya wax-dhismeedka-waxqabadka qayb-qayb, iyo hagaajinta maaddada qaabdhismeedka yaryar. Waxaa la soo saaray maaddooyin ka kooban macdan oo leh awood sare, modulus sare, tabin kuleyl hooseeya iyo ballaarinta kuleylka oo hooseeya. Iyada oo lagu saleynayo, qaab-dhismeedka sariirta mashiinka oo leh astaamo qoyan oo sarreeya iyo habka sameynta saxnaanta sariirta mashiinka saxda ah ee baaxadda leh ayaa la sii hindisay.
1. Guryaha Farsamada
2. Degganaanta kuleylka, isbeddelka heerkulka
Isla jawiga, ka dib 96 saacadood oo cabbir ah, marka la barbardhigo qalooca heerkulka ee mataanaha, xasiloonida shubista macdanta (granite composite) aad bay uga fiican tahay shubka cawlan.
3. Ilaalinta Deegaanka
4. Meelaha codsiga:
Badeecadaha mashruuca waxaa loo adeegsan karaa soo saarista qalabka mashiinka CNC ee dhammaadka ah, isku-duwa mashiinnada cabbirka, qalabka wax qodista PCB, qalabka horumarinta, mashiinnada dheelitirka, mashiinnada CT, qalabka falanqaynta dhiigga iyo qaybaha kale ee fiyuuska. Marka la barbardhigo walxaha birta dhaqameedka ah (sida birta la shubay iyo birta la shubay), waxay leedahay faa'iidooyin muuqda marka la eego daminta gariirka, saxnaanta mashiinka iyo xawaaraha.
Isbarbar dhigyada Granite Precision, Sax Granite dusha sare, Qalinka Granit Square Ruler, La taaban karo Epoxy, Sax Granite Cube, Sax Granite,